Nahoma 2 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
2 Miakatra ho eo anoloanao ilay mampiely ny vahoaka.+ Arovy ny toerana voaro mafy, ary ambeno ny lalana! Misikìna,* ary angony ny herinao rehetra.+ 2 Fa haverin’i Jehovah amin’ny laoniny tokoa ilay reharehan’i Jakoba,+ toy ilay reharehan’ny Israely, satria ny mpandroba efa nandroba azy,+ ary nopotehiny ny sampany efa nitsiry.+ 3 Nolokoana mena ny ampingan’ny olo-maheriny, ary miakanjo mena midorehitra+ ny lehilahy matanjaka. Manjelanjelatra toy ny afo ny vy amin’ny kalesin’ady, amin’ny andro iomanany hiady. Ary ahetsiketsiny ny lefona hazo.+ 4 Miriotra mafy eny an-dalana ny kalesin’ady,+ ka mifanaretsaka eny amin’ny tany malalaka. Toy ny fanilo no fahitana azy, ary mitsoriaka toy ny tselatra.+ 5 Hotsaroan’ny mpanjakany ireo manamboninahiny,+ nefa ho tafintohina eny am-pandehanana ireny.+ Hihazakazaka ho eny amin’ny manda ireny, fa tsy maintsy hohamafisina ny fefy hisakanana ny fahavalo. 6 Hisokatra ny vavahady eo amoron’ny renirano, ka hirodana ny lapa. 7 Tsy hiova izany didy izany. Nampitanjahina izy, ka hoentina ho babo.+ Ary hitoreo hanao feom-boromailala+ ny mpanompovaviny, sady hikapo-tratra.+ 8 Toy ny dobo+ i Ninive hatramin’izay nisiany.+ Mandositra anefa ny olona. Misy miantsoantso hoe: “Mijanòna, rey olona e! Mijanòna re e!”, nefa tsy misy miherika.+ 9 Mandrobà volafotsy, ary mandrobà volamena,+ satria tsy hita lany ny harena voatahiry. Ao ny karazan-java-tsarobidy+ rehetra sady tena be dia be. 10 Lasa fongana sy foana ary aolo ny tanàna!+ Mihorohoro ny fo,+ mangozohozo ny lohalika,+ ary manaintaina mafy ny andilana rehetra.+ Ary mitebiteby ny olona rehetra, ka hita eny amin’ny endriny izany.+ 11 Aiza ilay toeran’ny liona sy ilay lavaky ny liona tanora, dia ilay nandehandehanan’ny liona sy nidirany,+ ary ilay toerana nisy ny zana-diona, ka tsy nisy nampangovitra azy?+ 12 Namiravira remby ampy ho an’ny zanany ilay liona, ary nanakenda haza ho an’ireo liom-baviny. Nofenoiny haza tao an-davany, ary nofenoiny biby voaviravira ny toeram-piafenany.+ 13 “Hamely anao aho”, hoy i Jehovah Tompon’ny tafika.+ “Hodorako ao anaty setroka ny kalesin’adiny.+ Ho fatin-tsabatra ny liona tanora ao aminao,+ ary haripako tsy ho amin’ny tany ny rembinao. Ary tsy ho re intsony ny feon’ny irakao.”+
^ A.b.t.: “Hatanjaho ny andilana.”